Working with SCRUM – Naing Lin Aung – Medium
SCRUM ဆုိုတာ Agile Methodology တွေကုို လုိုက်နာနုိုင်အောင် အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ framework တစ်ခုပါ။ Project တစ်ခုလုိုမျိုး deliver လုပ်ပြီးရင် သိပ်ပြင်လေ့မရှိတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ Waterfall လုို Methodlogies တွေကုို သုံးလေ့ရှိပေမယ့် Continuous develop လုပ်နေရတဲ့ Product လိုမျိုးအနေအထားမှာ SCRUM ကုိုပုိုပြီးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ Lean နဲ့Kanban လုိုမျိုးကုို တခြားရုံးတွေက သုံးကောင်းသုံးပေမယ့် ကျွန်တော် မသုံးဖူးလုို့အတိအကျတော့မသိပါဘူး။ ဒီပိုစ်မှာတော့ ကျွန်တော်တုို့ အလုပ်ထဲမှာ လုပ်နေရတဲ့ SCRUM ကုိုပဲအဓိက ပြောသွားမှာပါ။
အရင်ဆုံး SCRUM ကုိုအသုံးပြုမယ်ဆုိုရင် Project တစ်ခုလုံးကုို task list တွေ ပုိုင်းပစ်ရပါတယ်။ ပိုင်းရင်းနဲ့မှ တချို့အပုိုင်း တွေဟာကြီးနေသေးရင် EPIC ဆုိုတဲ့ နာမည်တပ်ပြီး ထပ်ပုိုင်း ရပါတယ်။ EPIC ဆုိုတာကတော့ task list တွေရဲ့ category လုိုမျိုး သဘောမျိုးပါ။ ဥပမာ Blog တစ်ခုကုို Project အနေနဲ့ဥပမာပေးတယ် ဆုိုပါစုို့post တင်တဲ့ အပုိုင်းအတွက် Create, Retrieve, Update, Delete (CRUD) ဆုိုပြီးလေးပိုင်းရမယ်။ အဲဒီအတွက် EPIC ဟာ Post ဖြစ်ပြီး CRUD တစ်ခုချင်းစီက task list ပါ။ ဒီနေရာမှာ task list တွေကုို အသေးနုိုင်ဆုံး ခွဲနုိုင်လေ ပုို အဆင်ပြေလေ ပါပဲ။ အထက်က ဥပမာ အရဆုိုရင် CRUD ကုိုပဲ User Interface အတွက် Frontend က တစ်ပုိုင်း ၊ Server side အတွက် က တစ်ပုိုင်းပုိုင်းနုိုင်ပါတယ်။ သုို့ သော် များများပုိုင်းလေ ကောင်းလေ ဆုိုပြီးတော့ class တစ်ခုစီ method တစ်ခုဆီကုို ပုိုင်းရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ပါ။ SCRUM က ရည်စူးထားတာက One Bite atatime ဆုိုတော့ ကုိုယ်နုိုင်သလောက်ပါ။
Sprint ကုိုခန့်မှန်းတဲ့ အကြောင်းမလာခင် sprint ဆုိုတာ ဘာလဲလုို့ ရှင်းပြဖုို့ လုိုပါလိမ့်မယ်။ Sprint ဆုိုတာ အချိန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုပါ။ ဥပမာ ဘယ်သူက ဘယ်အချိန် ဘယ်လောက်ပြီးမလဲ ဆုိုတာ မှန်းဆဖုို့ အတွက် အချိန်သတ်မှတ်ချက်လုိုပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် Sprint တစ်ခုအတွက် တစ်ပတ် သုို့ မဟုတ် နှစ်ပတ် အလျဉ်းသင့်သလုို သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ sprint ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး quarter တွေတွက်ယူရပါတယ်။ quarter ဆုိုတာက sprint တစ်ခု ထဲမှာ ပါဝင် အချိန်အပုိုင်းအခြားတွေပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်တုို့ရုံးတက်ချိန်ကုို လေးပိုင်းပုိုင်းပြီး တစ်ပုိုင်းကို quarter တစ်ခု သတ်မှတ်မလား ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နာရီကုို quarter တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်မလား။ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ Scrum Master ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သမရုိုးကျ Project Managment လုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ Scrum Master ဆုိုတဲ့ အသုံးကို စိမ်းကောင်းစိမ်းနေလိမ့်ပါမယ်။ SCRUM Master ဆုိုတာက Project မှာပါဝင်သူတွေ (Developer, Designer စသဖြင့် စသဖြင့်) အလုပ်ကို ပိုမုိုပြီးမြောက်နုိုင်ဖုို့အထောက်အကူပြုသူတွေပါ။ SCRUM မှာ Project Manager ဆုိုတဲ့ role မရှိပါဘူး။ Project Manager နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူတဲ့ Product Owner ဆုိုတာတော့ရှိသော်လည်း အတိအကျတော့ မတူပါဘူး။ Product Owner ဆုိုတာက Product အတွက် လုိုအပ်တဲ့ Feature တွေကုို သတ်မှတ်ပေးတဲ့သူပါ။ Project manager နဲ့ မတူတာက သူက decision maker ပါ။ အထက်ရဲ့အထက်ရဲ့ အထက်ဆုိုတာလုိုမျိုး လုိုက်လံညှိနှိုင်းရင်း အလုပ်ရှုပ်ထွေးမှာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ Product Owner ရဲ့decision ကုိုမူတည်ပြီး SCRUM master က ရှိတဲ့ developer တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Scrum Master ဟာ ပါဝင်သူတွေနဲ့Product Owner ကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူပါ။
ရှေ့ဆက်ရရင် ပေးထားတဲ့ အချိန်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး SCRUM master က ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ဘယ်လုိုလုပ်ရင် ဘယ်အချိန်လောက်ပြီးမလဲ ၊မှီမလား မမှီဘူးလား ဆုိုတာ ခန့် မှန်းဆုံးဖြတ်ရတာပါ။ ဥပမာ developer တစ်ယောက် နဲ့ designer တစ်ယောက်ပဲ ပါတဲ့ product တစ်ခု ၊ blog ပဲဆုိုပါစုို့ ။ CRUD အတွက် Frontend အတွက် task လေးခု ၊ Server side အတွက် task လေးခု ၊ Designer က Photoshop template လေးခု အတွက် task က ၁၂ ခုပါ။ အဲဒီအတွက် အချိန် တစ်ပတ်ပဲရတယ် ဆုိုပါစုို့ ။ တစ်ပတ်မှာ ငါးရက်ရှိပြီး တစ်ရက်မှာ4quarter လုိုယူမယ် ဆုိုရင် တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် quarter က ၂၀ ဖြစ်ပြီးတော့ စုစုပေါင်း 40 quarters ပါ။ ပြီးရင်တော့ developer နဲ့designer ကုို task တစ်ခုအတွက် quarter ဘယ်နှစ်ခုလုိုမလဲ ဆုိုတာ မေးရပါတယ်။ ဥပမာ Create အတွက် ငါးခု ၊ Edit က သုံးခု ၊ retrieve က နှစ်ခု နဲ့delete က တစ်ခုလုို့ဆုိုပါစို့ ။ စုစုပေါင်း ၁၁ quarter ပါ။ design အတွက် template တစ်ခုကို3quarter စီ ဆုိုပါစို့ ။ designer အတွက် 12 quarter ပါ။ ဒီအတွက် စုစုပေါင်း 12+10 = 22 quarter ကျမှာဖြစ်ပြီး ရထားတဲ့ quarter က 40 ဖြစ်တော့ လောက်တယ်လုို့အကြမ်းဖြင်းယူဆလို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် task တွေကို priortise လုပ်ရပါမယ်။ အခု လက်ရှိကိစ္စအတွက် ဆုိုရင် Front End က design ပြီးမှ လုပ်လုို့ ရမှာပါ။ ဒီအတွက် အပြိုင်လုပ်လုို့ ရမှာက Design နဲ့Server Side ပါ။ အဲဒီအတွက် Epic ကုိုပြန်စီရပါတယ်။ ပြီးရင် Epic တစ်ခုချင်းစီက task list ကုို ထပ်စီရပါတယ်။ ဥပမာ CRUD မှာ ပြတာဖြစ်တဲ့ retrieve ကုိုအရင်လုပ်မယ်။ data ကုိုတော့ database ထဲကနေ seed လုပ်ပြီး ပြမယ်ပေါ့။ ပြီးရင် Create ကုိုလုပ်မယ်။ သူနဲ့ ဆင်တဲ့ Update ကုိုလုပ်မယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ update ကုို လုပ်မယ် ဆုိုပြီး ထပ်စီလုို့ ရပါတယ်။
Quarter သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ Product Owner က ဒါက ဒီလောက်ဆုိုပြီး ဝင်သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ SCRUM အရဆုိုရင် Product Owner မှာ အဲဒီလုပ်ပုိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ Quarter ကုို SCRUM master နဲ့developer နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သတ်မှတ်ရပါတယ်။ Quarter သတ်မှတ်ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်က Point ကုိုသတ်မှတ်ရပါတယ်။ Quarter ကုိုသတ်မှတ်တာက ပြီးလောက်မယ့် အချိန်ကာလကုို မှန်းဆနုိုင်အောင် ရာထားတာဖြစ်ပြီး point ကတော့ အဲဒီလုိုမဟုတ်ပါဘူး။ point က task တစ်ခုရဲ့ခက်ခဲမှုအပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ပါတယ်။ point ကုိုသတ်မှတ်တဲ့ factor တွေကတော့ Complexity (ဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးသလဲ ?) ၊ effort ( ဘယ်လောက် အားစုိုက်ရသလဲ ?) ၊ Uncertainty (ဘယ်လောက် မသေချာ သလဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ချင့်ချိန်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှေ့နှစ်ခုကုို ရှင်းပေမယ့် နောက်တစ်ခုကို နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နုိုင်ချေ ရှိတယ်။ ဘာကုို မသေချာတာလဲ ဆုိုတာ။ ဒါကတော့ task အတွက်ပေးထားတဲ့ဟာကို နည်းပညာ A နဲ့ အသုံးပြုပြီး ရေးမယ် ဆုိုပါစုို့ ။ အဲဒီ နည်းပညာ A ကုို တကယ်တမ်း လေ့လာလုိုက်မှ အဲဒီ နည်းပညာ A နဲ့အဲဒီ task ကိုလုပ်မရဘူး ဆုိုတာ ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကုို ထားထားတာပါ။ သတ်မှတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း SCRUM master က ညေး မင်းတော့ ဒီလောက်ယူလုိုက်ကွာ ဆုိုပြီး သတ်မှတ်တာထက် Planning Poker ကို အသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ (planning poker အကြောင်းကိုတော့ နောက်မှ သတ်သတ် ရေးပါမယ်။)
ပြီးရင်တော့ Definition of Done (DoD) ကုိုသတ်မှတ်ရပါတယ်။ DoD ဆုိုတာက task တစ်ခုပြီးမြောက်တာကို ဘာနဲ့ သတ်မှတ်မလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ Create အတွက် task ကုိုရေးလုိုက်တာပဲ ၊ implmentation ကြမှ error တွေမှ ပုံလုို့ ဆုိုတာမျိုးဆိုတာ မထူးဆန်းတဲ့ အနေအထားပါ။ အဲဒီအတွက် DoD ကုို သတ်မှတ်ဖုို့ လုိုပါတယ်။ team တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု DoD သတ်မှတ်တာမတူပါဘူး။ တချို့team တွေအတွက် ပုံလေးပေါ် စာလေးထည့်လို့ ရရင် တော်ပါပြီ ဆုိုတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နုိုင်ပေမယ့် တချို့team အတွက် Unit test pass ဖြစ်ရမယ် ၊ Jenken ပေါ်မှာ တခြား PHP version အစုံနဲ့Device အစုံပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ် ၊စသဖြင့် စသဖြင့် ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို Sprint Planning မှာ တခါတည်း ဆွေးနွေးရပါတယ်။
ပြီးလုို့Sprint ကုိုအတည်ပြု အလုပ်တွေခွဲဝေလုပ်ရင်း sprint တစ်ခုပြီးတုိုင်းပြီးတုိုင်း Sprint Review section ကုို team member တွေနဲ့ ပြန်ထုိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အပုိုင်းနှစ်ပုိုင်းပါပါတယ်။ ပထမတစ်ပုိုင်းကတော့ လက်ရှိ sprint ရဲ့အခြေအနေ ၊ အလုပ်တွေ ပြီးမပြီးနဲ့၊မပြီးရင် ကျန်ခဲ့တဲ့ task တွေနဲ့အသစ်လာမယ့် task တွေကုို နောက် sprint planning မှာ ထည့်သွင်းရမယ့် အကြောင်းပါ။ နောက်တစ်ပုိုင်းက အခု run နေတဲ့ sprint process ကြီးရဲ့ အခြေအနေပါ။ အထဲက developer တွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိုးမပြေလုို့ ပေါက်ကရတွေ လုပ်သလား ၊ ကြားထဲမှာ interrupt တွေဘာရှိသလဲ ၊ စသဖြင့် စသဖြင့်ပါ။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ သုံးပုိုင်းပုိုင်းလုို့ ရပါတယ်။ Start ၊ Stop နဲ့Continue ပါ။ Start မှာက နောက် sprint မှာ ဘာတွေစပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုး ၊ ဥပမာ Unit test မလုပ်ဖြစ်ဘူး ၊အခုလုပ်မယ်။ Stop ကတော့ ဘာတွေကုို ရပ်သင့်သလဲဆုိုတာမျိုး ၊ ဥပမာ အခု workflow က အဆင်မပြေဘူး ဘယ်လုို ပြောင်းသင့်တယ် ဆုိုတာမျိုး ၊ continue ကတော့ နောက် sprint တွေမှာပါ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ အစဉ်အလာကောင်းမျိုးဟာမျိုးတွေပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ အိပ်ခါနီး အချိန်ရသလောက် လက်တန်းရေးလုိုက်တာမျိုး လွန်တာရှိ ဝန္ဒာမိပါ။ တကယ့်တကယ်ပုံတွေ စာတွေနဲ့ ဝေဆာနေအောင် ရေးမှ ပုိုပြီး ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့်လည်း ၊ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ဖတ်မလဲ ဆုိုတာ အတိအကျ မသိလုို့အကြမ်းလောက်ပဲရေးလုိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဝင်မန့် သွားနုိုင်ပါတယ်။
originally wrote it in facebook
Clapping shows how much you appreciated Naing Lin Aung’s story.
Never missastory from Naing Lin Aung, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Naing Lin Aung